ဘလော့ဂါအဘို့, 50 နှစ်ကြာတိုတောင်းသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ကြီးမြတ်ဖြစ်ပါသည်, ပရိသတ်တွေလုံးဝသဘောတူကြသည်! - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကျွန်မရဲ့ကျန်းမာရေး "ဘလော့ဂါများအတွက် 50 နှစ်ကြာတိုတောင်းသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ကြီးမြတ်ဖြစ်ပါသည်, ပရိသတ်တွေလုံးဝသဘောတူကြသည်!
ဘလော့ဂါအဘို့, 50 နှစ်ကြာတိုတောင်းသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ကြီးမြတ်ဖြစ်ပါသည်, ပရိသတ်တွေလုံးဝသဘောတူကြသည်!
အမြဲကြော့နှင့်စတိုင်ကိုကြည့်ဖို့ဘယ်လိုသိမှတ်ကြလော့အသစ်ကခေတ်ရေစီးကြောင်းသင်ယူခြင်းအပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်းပေးထားသောအခြေအနေနှင့်မည်ကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်များပေါင်းစပ်ရန်အဘို့အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်သည့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေါ်တွင်အခြေခံသည်သာ။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်သိပ်လုပ်ဖို့အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်သူတို့ဖြစ်ကြသည်ထက်အသက်ငယ်ကိုကြည့်ရှုဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါသတိထားဖြစ်ခြင်း၏ 50 နှစ်အတွင်းမိန်းမတို့အဘို့အကြံပြုသည်။
Посмотретьэтупубликациюв Instagram ကို
Публикацияот Inna Malikova (@innamalikova) 29 2019 Майв 9: 45 PDT ရန်ကုန်
တချို့ရှိပါတယ် ကျပုံစံ အမြိုးသမီးမြားမရှိတော့အဖြစ်မကြာမီသူတို့ 35 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်ရောက်ရှိအဖြစ်ဝတ်ဆင်သင့်ကြောင်းအဝတ်အကြောင်းကို။ ဆိုရိုးစကား, သီးနှံထိပ်, အပူပိုင်းပုံနှိပ်နှင့်ကျားသစ်ပုံနှိပ် leggings နှင့်အတူဥပမာ T-ရှပ်အင်္ကျီ။
ဤစာရင်းတွင်လည်း miniskirts ပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကား, အထည်ချုပ်အင်တာနက်ပေါ်ရှိတစ်သွက်ဆွေးနွေးမှုများ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါဘလော့ဂါ 42 နှစ်ပေါင်းရုရှားအဆိုတော်နှင့်ထုတ်လုပ်သူ, Inna Malikova, "မသင့်လျော်" ဓါတ်ပုံပေါ်တွင်မှတ်ချက်များမှာမိမိစိတ်ပျက်လက်ပျက် shared နှင့်လည်းသူ့ရဲ့စာမျက်နှာထုတ်ဖော် Instagram ကို.
Публикацияот Inna Malikova (@innamalikova) 17 2019 вИюн 9: 41 PDT ရန်ကုန်
ကား, အဆင်းလှသော neckline တစ်ခုသို့မဟုတ် miniskirt အတူစားဆင်ယင်ဝတ်ဆင်လိုသူ 40 ကျော်ယေဘုယျအမျိုးသမီးတွေအတွက်တရားစီရငျဖို့ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကအကြောင်းတချို့မညီကြောင်းဆုံးမသွန်သင်ထားသည်။
ကျွန်မပထမဦးဆုံးကန့်သတ်လေးစားခံရဖို့နဲ့ဗေဒရှိသင့်ကြောင်းသဘောတူသည်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်တစ်ဦးမျှမျှတတရှေးရိုးစွဲလူတစ်ဦးဖြစ်၏။ ကသဟဇာတဖြစ်ပြီးသောအခါမူကားအဘယျကွောငျ့အမြိုးသမီးမြားဆင်ခြေသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတရားမျှတသို့မဟုတ်လုပ်ဖို့လွတ်လပ်မှုအရှုံးမပေးစေသင့်သနည်း ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအဆိုးမြင်စိတ်တွေတခြားအမျိုးသမီးထံမှလာအဘယ်ကြောင့်လည်း, ငါသည်နားမလညျဘူး။
Публикацияот Inna Malikova (@innamalikova) 13 2019 Апрв 2: 56 PDT ရန်ကုန်
ငါလုံးဝသဘောတူသည်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးများကိုသူတို့အခြားသူများကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော, အစဉ်အမြဲအသီးအသီးအခြားအကိုမနာလိုဖြစ်ကြသည်။
အစဉ်မပြတ်ငါ "အဘယ်ကြောင့်သင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုံးကွယ်ချင်လျှင်လှပသောခြေထောက်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့နှောင့်ရှက်?" ထင်ဒါဟာမိုက်ရဲ့, ကသည်မဟုတ်လော တင့်တယ်ပါးလွှာခြေထောက်သင်ပြုပါရန်လုံလောက်သောရဲရင့်ဖြစ်ကြကမ္ဘာကိုပြသခံရဖို့လုပ်ကြသည်!
ПубликацияотОДЕЖДАЖЕНСКАЯОТПОСТАВЩИКА (@fashion_boutique1313)32019 Майв 5: 01 PDT ရန်ကုန်
ဒီအကြောင်းသင့်ရဲ့အမြင်ကဘာလဲ? သငျသညျအနှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို 50 လျှင်သင် miniskirts ဝတ်ဆင်နိုင်ပါသလား? သငျသညျတင်းကျပ်စွာဆင်မြန်းထားနိုင်သလား? အောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်သင်တို့၏အကြံအစည် share ပေးပါ။
ဒါဟာလိုအပ်ချက်အတွက်လူငယ်တစ်ဦးကမိန်းကလေး၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအဘို့အချေ: 11 နှစ်ကြာပြီးနောက်သူမသည်သူ၏အသက်တာကယ်တင်
Inde: Assam CM examine la loi et l'ordre en prévision de la publication finale du CNRC le 31 août | Inde Nouvelles
လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြီးနောက်, Harley-Davidson လျှပ်စစ်စက်ဘီးကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်ပါသည်
G7: ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှအပြိုင်အတွက်, Emmanuel macron 12 အခြားနိုင်ငံများအားလက်ခံတွေ့ဆုံ - ဗွီဒီယို
အိုင်ဗရီကို့စ်ဘောလုံး: အာဖရိကအားကစားယင်း၏အကျပ်အတည်း Vagba Bahi အဆုံးသတ်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်
အဲဒီအစား Inter ACCIDENT_CPK တီဗီများ၏ TV3 အစ်ကို Arafat DJ သမားအျောဟစျသံ IN - ဗွီဒီယို
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်3,256
TECH & Telecom1,616